Sony Photo Recovery naghachi Photos si Sony DSC TX7C
> Resource> Naghachi> Sony Photo Recovery: Naghachi Photos si Sony ese foto
Photo ọnwụ ọnọdụ nke Sony ese foto
1. Mgbe ụfọdụ, ị chọrọ ka ihichapụ otu ma ọ bụ ọtụtụ foto na ị na-eche jọrọ njọ. Ọfọn, ị carelessly họọrọ 'Hichapụ All', kama 'ehichapụ Otu', na efu gị niile foto.
2. ezighị formatted gị Sony igwefoto na kaadị ebe nchekwa, na-ehichapụ gị niile foto si gị igwefoto, dị ka Sony DSC TX7C.
3. Mgbe ebufe niile foto gị Sony igwefoto na kọmputa, ị ihichapụ foto niile na gị Sony igwefoto ozugbo. Otú ọ dị, ị chọpụtara na ndị photos na-adịghị n'ụzọ zuru ezu kpọfere kọmputa, ma Sony igwefoto ebe nchekwa e bupụrụ ugbua.
Olee otú naghachi foto site na Sony ese foto
Ọ bụ ihe nwute na ese foto na-adịghị amasị kọmputa. Mgbe ihichapụ, i nwere ohere iji nweta azụ furu efu foto na egweri biini. N'ezie, ọ pụtaghị na ị na-adịghị ụzọ ọ bụla naghachi foto site na Sony ese foto. A foto mgbake ngwá ọrụ ya zuru okè àgwà na mmetụta nwere ike mee ka otu N'ihi nke na-azụ furu efu photos.
My umeala n'obi nkwanye: Wondershare foto mgbake bụ ọmarịcha omume na-enye gị ohere iji naghachi foto site na Sony ese foto, n'agbanyeghị na ị na-efu ha ruru nhichapụ, format ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Dum ọrụ na-ewe gị 3 mfe nzọụkwụ. Ọ bụrụ na ị na-eji Mac OS, na-agbalị Wondershare Photo Recovery for Mac.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a.
Iji nweta nnukwu ihe ịga nke ọma ruru nke Sony Igwefoto foto mgbake, ị ga mma ịkwụsị iji igwefoto a. Biko adịghị ọhụrụ photos na ya n'ihu Sony foto mgbake zere overwriting furu efu photos. Overwriting ga-eme ka gị photos unrecoverable.
Ọzọ, ka na-agbalị na Windows mbipute a Sony igwefoto foto mgbake ngwá ọrụ na zuru ezu nzọụkwụ.
Step1. Jikọọ gị Sony igwefoto na kọmputa
Nke mbụ niile, jikọọ gị Sony igwefoto na kọmputa ebe gị foto mgbake arụnyere. Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume na pịa "Malite" ke akpan window na-amalite gị Sony igwefoto foto mgbake.
Step2. Họrọ gị Sony igwefoto ka iṅomi
Ebe a, gị Sony igwefoto kaadị ebe nchekwa ga-achọpụtara na-egosipụta dị ka a mbanye akwụkwọ ozi. Họrọ ya na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu foto site na ya.
Step3. Preview na-agbake Sony igwefoto photos
Mgbe mgbe, mgbe Doppler completes, ị nwere ike ihuchalu ndị recoverable photos otu otu. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na igwefoto ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa echiche.
Video nkuzi nke Sony DSC igwefoto foto mgbake